Adeegyada Dugsiyada | Abaalmarinta Abaalmarinta | Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Hay'adda Reward Foundation waa hay'ad samafal oo hormuud ah oo adeegsanaysa cilmi-baarista cilmiga sayniska iyo cilmi-baarista sayniska oo ay weheliso waayo-aragnimada sharciga dembiyada iyo khibrada wax-barashada ee jinsiga ah si loo bixiyo adeegyo iskuul ah labada iskuulo iyo dugsi hoose. Waxaan ka caawin karnaa sidii loo abuuri lahaa adkeysiga ardaygaaga adoo adeegsanaya macaamilada internetka iyo caawinta waalidiinta si wadajir ah ula shaqeeya dugsiga si ay u xaqiijiyaan nidaamka taageerada isku midka ah ee carruurtooda.
Casharrada isdhexgalka ah ee ardayda da'doodu tahay 11 illaa 18 oo qayb ka ah manhajka dugsiga ee Shakhsiyeed, Bulsho, Caafimaad iyo Dhaqaale ama Iskuulada iyo Cilaaqaadka Waxbarashada oo dhammaystiraya xiriirka cusub, Caafimaadka Galmada iyo Waalidiinta (RSHP).
Nidaamkayagu waa inaanu wax ka barno ardayda si ay uga caawiyaan inay sameeyaan doorashooyin la ogsoon yahay si ay u sii wataan jawiga galmada internetka si ammaan ah. Iyadoo la ogaanayo saameynta caafimaadka, sharciga iyo xiriirka internetka ee bogagga internetka iyo warbaahinta bulshada, waxay hoos u dhigi karaan khatarta ah inay ku noqdaan isticmaalka qasabka ah ama ay caawimaad u raadsadaan haddii ay sameeyaan, iyo inay isku kalsoonaadaan aqoonsigooda iyo naftooda u qalma.
Waxaan sidoo kale awood u siineynaa waalidiinta in ay si wax ku ool ah ula xiriiraan caruurtooda guriga iyagoo kula talinaya sida loo helo wadahadalada adag ee mawduuca xasaasiga ah. Taas darteed waxaan u adeegsanaa waraysigeyaga gaarka ah ee khabiirada caafimaadka iyo kan sharciga ah iyo dib u soo celinta dadka isticmaala si loo baaro cilmibaarista macnaha guud. Waxaan adeegsaneynaa qalab iyo taageerid waalidiinta, macallimiinta iyo dhalinyarada. Maaddooyinka waxay ku haboon yihiin dugsiyo diimeed ku salaysan.
Hay'adda Reward Foundation waxay hadda samaysay mashruuc tijaabo ah oo ka mid ah dugsiyo badan oo Iskotish iyo Irish ah oo bixiya casharrada 2 mid kasta oo loogu talagalay P7, S2 / 3 iyo S5 / 6. Iyada oo laga soo xiganayo macalinka waxbarashada khibrada leh ee jimicsiga waxaan qorsheynaynaa casharrada ku habboon macalimiinta hogaaminaya ama casharada ardeyda. Looma muuqan wax sawir ah.
Casharradu waxay diiradda saaraan sida maskax-barbaarinta dhalinyarta ay u bartaan oo ay horumaraan. Macallimiintu waxay la qabsan karaan casharrada ku salaysan waayo-aragnimadooda baahida iyo kartida ardayda. Mashruuca tijaabada ah wuxuu socon doonaa illaa dhammaadka March 2019. Marka la dhameeyo iyo ka dib qiimeynta macallimiinta, ardayda iyo waalidiinta, waxaan qorsheyneynaa inaan casharrada u heli karno dugsiyada bilaash ah. Sadaqadeena hadda ma helin maaliyad dowladeed.
Waqtigan xaadirka ah, Hay'adda Reward waxay bixisaa kulamo kala duwan oo iskudhaf ah oo loogu talagalay dugsiyadu inooga dhiibaan kooxda sanadka oo dhan sida casharro ama seminaaro koox yar iyo wadahadal ku haboon si loogu habeeyo da'da kooxda. Waxay ku dhammaadaan daqiiqado 50-60. Mar labaad, lama muujiyo sawiro. Waxaan la shaqeyneynaa labada kooxood ee kali ah iyo isku dhafan sida ay iskuulada u doortaan. Qalabku waa kala duwanaansho.
S2 / 3: Maqalka: arrimaha caafimaadka iyo sharciga
Sababta maskaxda qaangaarka ahi waxay u nugul tahay qulqulatada ka soo horjeeda maqaarka
S5 / 6. maskaxda iyo saameynta jireed ee kufsiga ee ku saabsan pornography internetka
Ardaydu waxay qiimeeyeen caddaymo badan si ay u go'aamiyaan haddii filimku uu yahay mid xariif ah ama aan la qabin
Saameyn ku yeelashada dareenka; wax soo saarka iyo xiriirka
Diidmada saameynta sawir-gacmeedyada ficil ahaaneed oo qayb ka ah 'dhaqaalaha dareenka'
Galmada iyo warbaahinta: barashada sida loo xayeysiiyo xayeysiiska; muusikada muusiga; warshadaha luuqada; sida aan naftayda u qiimeeyo
24-Saacadaha Detox Digfeer ee 2 fadhiyada c. 7 maalin kala duwan: Layligani wuxuu daboolayaa dhammaan isticmaalka internetka.
Qaybta 1 waxaa ka mid ah falanqaynta bilawga ah ee ku saabsan cilmi baarista "naqshad jilicsan", ka-helitaan deg-deg ah iyo is-xakamayn; Talooyin ku saabsan samaynta fal-baxa
Qaybta 2, waxay ka war qabtaa wixii ay soo mareen inay isku dayeen XAMKA 24 saacad inta lagu jiro usbuuca soo dhexgalka
My Fantastic, Maskaxda Baastoolada: fahmayso shaqada maskaxda iyo cusub cusub (doonista iyo fikirka)
Fahmaan sida sawirada muuqaalka jinsiga ah ay u wareeri karaan fikradaha; Maxaa la sameeyaa haddii aan arko fiidiyow iyo sawirro iga xanaaqaya?
Qayb ka mid ah 2 falanqayn ku saabsan wixii ay soo mareen waxay isku dayayaan 24-Saacada saacada inta lagu jiro usbuuca soo-galootiga
La hadal waalidiinta wixii caddayn ah ee ugu dambeeyay ee ku saabsan waxyeelada iyo xeeladaha lagu xallinayo dhibaatooyinka iman kara. Tani waxay caawisaa barafka si looga wada hadlo wadahadalka guriga
Saxeexa ilaha waxtarka leh, qaar badan oo ka mid ah oo bilaash ah, si ay waalidiinta uga caawiyaan inay fahmaan arimaha ballaaran ee ku lug leh
Fadlan kala soo xiriir anaga oo ku saabsan ereyada bilaash ah. Hay'adda Abaalmarinta Reward waxay kaloo bixin kartaa casharro haboon oo loogu talagalay inay daboolaan baahiyahaaga.